Otú ịgbanwe EPUB Cover Via iTunes
> Resource> iTunes> otú ịgbanwe EPUB Cover site iTunes
Obi abụọ adịghị, ma ọ bụrụ na ị zụta EPUB e-akwụkwọ site iTunes Store ma ọ bụ iBooks ụlọ ahịa, ị nwere ike inwe EPUB akwụkwọ 100% na mkpuchite. Otú ọ dị, ihe pụrụ-adị nnọọ iche ma ọ bụrụ na ị download free EPUB akwụkwọ site na ụfọdụ e-akwụkwọ nkekọrịta saịtị ma ọ bụ mee ka EPUB akwụkwọ site onwe gị. Nọmalị, ndị a EPUB akwụkwọ na-adịghị mkpuchite. Mgbe ị na-egosipụta na ha na e-agụ iBooks ma ọ bụ Stanza, ị pụghị iche ha si otu onye ọzọ. Na ikpe, i nwere ike iji tinye pụrụ iche mkpuchite maka onye ọ bụla EPUB akwụkwọ karị. N'ezie, ọ bụ mara mma mfe imeta mgbaru ọsọ gị. Ebe a bụ ụzọ: tinye EPUB cover site iTunes.
Akpa, ị kwesịrị inwe ụfọdụ kwekọrọ ekwekọ akwụkwọ mkpuchite, ma download si Internet ma ọ bụ mee site onwe gị. Zọpụta ndị a akwụkwọ mkpuchite na draịvụ ike gị.
Nke abụọ, ẹkedori iTunes na mbubata gị EPUB akwụkwọ nke na-enweghị mkpuchite ka iTunes Library. Na-aga "File> Tinye File ka Library" na ịnyagharịa ka EPUB akwụkwọ na pịa "Open". Ma ọ bụ i nwere ike na-ịdọrọ na dobe EPUB akwụkwọ iTunes Library.
Nke atọ, ke "Book" ngalaba, i nwere ike ịhụ akwụkwọ ndị a niile bụ enweghị mkpuchite, naanị na akwụkwọ aha mmasị na ya. Right-pịa otu onye n'ime ha ma họrọ "Get Info" na-emeghe mkparịta ụka igbe metụtara EPUB. Pịa "osise" taabụ na-emeghe na-agbakwunye artwork mkparịta ụka igbe na pịa "Tinye" button na na interface ka ịgbakwunye njikere EPUB cover.
Ị na-mere ya! Ọ bụ jụụ, nri? Nke a bụ ụzọ kacha mfe m ji ịgbakwunye nkecha mkpuchite m EPUB akwụkwọ. Ọ bụkwa irè mgbe ị chọrọ dochie nke ochie cover na onye ọhụrụ. Ọ pụrụ ịbụ ihe bara uru ma ọ bụrụ na i nwere ike na-eji oge hazie gị onwe gị e-akwụkwọ mkpuchite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ gị onwe gị EPUB ebook si Okwu, Text, oyiyi na ndị ọzọ mara mma ebook mkpuchite, na-agbalị Wondershare MePub, a ọkachamara EPUB Nrụpụta ike EPUB eBooks.